Ahụhụ Vnye ọnụahịa Email
Wenezde, August 7, 2013 Wenezde, August 7, 2013 Douglas Karr
Anyị enweela ụfọdụ nsogbu na mgbago mgbe anyị na-achọ ezigbo ndị na-eweta ọrụ email. Ọtụtụ ndị na-enye ọrụ email anaghị enwe ngwa mgbakwunye anyị chọrọ iji zipu ozi email anyị (anyị ga-enwe ụfọdụ akụkọ na n'oge na-adịghị anya)… mana nnukwu nsogbu anyị nwere na mmemme email anyị bụ ikike iji tụnyere ego na ọnụ nke ngwa ahụ.
Iji nweta isi ihe ahụ, ụfọdụ ụdị ọnụahịa SaaS bụ nzuzu doro anya… na-ata ụta ụlọ ọrụ gị karịa ịkwụghachi ya ụgwọ. Ihe m na-atụ anya dị ka azụmaahịa ma ọ bụ onye na-azụ ahịa bụ na ka m na-eji ọrụ gị, uru ọ ga-aba ga-adị mbadamba ma ọ bụ melite (na okwu ndị ọzọ - ọnụ ahịa otu ojiji ga-adị otu ma ọ bụ gbadaa). Nke a anaghị arụ ọrụ ịnye ọnụahịa steepụ ị hụrụ - ọkachasị ndị na-ere email.
Nke a bụ ọnụahịa ọha na eze nke ndị na-ere ahịa (Onwa kwa ọnwa na ndị debanyere aha):
Ke akpa ilekiri, ọ na-egosi kama na-agbanwe agbanwe… ọzọ ndị debanyere aha na-agbakwụnye ukwuu kwa ọnwa na-eri. Nsogbu a dị na ntụgharị. Ka anyị kwuo na m na-ezigara ndị debanyere aha 9,901. Nke ahụ bụ $ 75 kwa ọnwa. Mana ọ bụrụ na m tinye ndị debanyere aha 100, enwere m nsogbu. Ọnụ ego m na-akwụ kwa ọnwa dị $ 150 ma ọnụ ahịa onye ọ bụla debanyere aha na-abawanye 98%. Kwa onye debanyere aha, ọnụ ahịa nke iji sistemụ eme ihe okpukpu abụọ.
Nke a dị njọ na onye na-ere anyị ugbu a na m kwụsịrị iziga ndepụta m niile. Ihe anyị na-akwụ sitere na $ 1,000 kwa ọnwa ruo ihe dị ka $ 2,500 kwa ọnwa n'ihi na m nwere ndị debanyere aha 101,000. Ọ bụghị na m na-eche na-akwụ ụgwọ ihe maka izipu ihe… ọ bụ n'ụzọ nkịtị na e nwere ihe a steepụ-nzọụkwụ na-akwụ ụgwọ m na-apụghị recoup site anyị ahịa mgbalị ma ọ bụ nkwado. Site na onye debanyere aha, ego m ga-akwụ karịrị okpukpu abụọ. Ma enweghị m ike ịkwụghachi ụgwọ ahụ.
Sọftụwia dịka ndị na - eweta ọrụ ga - elebanye anya na sistemụ ịkwụ ụgwọ kwa Amazon ma ọ bụ nchịkọta nchịkọta nwere ọnụ ụzọ ebe price tụlee mgbe ị na-azụ ahịa gị. Ikwesiri ịkwụghachi azụmaahịa na-eto eto, ọ bụghị ịta ya ahụhụ. Ọ bụrụ na m nwere ndepụta nke 101,000, onye ahịa ọzọ nwere ndepụta nke 100,000 ekwesịghị ịkwụ ụgwọ obere maka onye debanyere aha karịa m. Nke ahụ bụ ogbi doro anya.
Emailkwalite Nkesa Email na Nkeonwe
Okwu ọzọ na sistemụ ndị a na-akwụ ụgwọ maka ọnụ ọgụgụ kọntaktị na sistemụ gị karịa ego ole ị na-eziga ya na ya. Ọ bụrụ na m nwere nchekwa data nke otu nde adreesị ozi-e, ekwesịrị m ịbubata ya, kesaa ya ma zipụ naanị akụkụ m maara ga-eweta arụmọrụ kasịnụ.
Ọtụtụ n'ime sistemụ ndị a na-akwụ ụgwọ site na nchekwa data gị karịa iji sistemụ gị. N'iburu nke ahụ n'uche, olee otu ị ga-esi taa ụta maka ụlọ ọrụ maka mkpọsa na ịgba mkpọmkpọ ebe? Ọ bụrụ na a ga-akwụ gị ụgwọ maka onye ọ bụla debanyere aha, ị nwekwara ike izigara onye ọ bụla debanyere aha!
N'ihi ọnụahịa a, ụlọ ọrụ ndị a na-amanye aka m. Ọ bụ ezie na m nwere ike ịhụ onye na-ere ahịa n'anya ma nwee ekele maka ọrụ ha, ụgwọ azụmaahịa kwuru na m ga-ewere azụmahịa m gaa ebe ọzọ. Ọ bụ ezie na m ga-enwe mmasị ịrapara na ezigbo onye na-ere ahịa, enweghị m ego nke ga-abanye ma m tinye ndị debanyere aha 100 na nchekwa data m.
Tags: ọnụahịa emailemail ịnye ọnụahịaemail zipu egoonye na-enye ọrụ emailonye na-ere ahia email